Gonzalo Higuain haloo diro Todobaadyo dalxiis ah waayo waxba uma hayo Juventus? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Gonzalo Higuain haloo diro Todobaadyo dalxiis ah waayo waxba uma hayo Juventus?
(22-9-2017) Mid ka mid ah Cayaartoydii Caanka ahayd ee soo martay kooxda Juventus Fabrizio Ravanelli ayaa Weerar ku qaaday Cayaaryahanka dalka Argentina ee Gonzalo Higuain kaas oo uu ku dhaleeceeyey qaab Cayaareedka uu xiligaan soo bandhigay.
Fabrizio Ravanelli oo Waraysi siiyey Radio Sportiva ayaa u sheegay Macalinka Juventus Max Allegri in uu dib u eego Xaalada Cayaaryahankiisa Gonzalo Higuain kaas oo uu yiri Waa in uusan ku soo bilaabin Garoonka kulanka darbiga ah ee ay Torino lacayaari doonaan habeenka Sabtiga ah.
Ravanelli oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri waxaan ku talinlahaa in Gonzalo Higuain loo diro Todobaadyo dalxiis ah si uu Maskixiyan u Noqdo mid degan oo kalsooni heli kara isaga oo aaminsan in Cayaaryahanka dalka Argentina ay haysato dhibaato aamin daro Naftiisa ah.
Ninkaan eedeynta u soo jeediyey Cayaaryahan Gonzalo Higuain ee Fabrizio Ravanelli ayaa Juventus u dheeley 158 kulan isaga oo u dhaliyey 58 Gool waxaana uu aaminsanyahay in dhibaatada Juventus Xiligaan ay tahay Gonzalo Higuain isaga oo dalbaday in keyd lageliyo ama loo diro dalxiis.